Home Wararka Cudurka Covid19 kiisa khatarta ah oo dalka Soomaaliya ku sii fidaya
Cudurka Covid19 kiisa khatarta ah oo dalka Soomaaliya ku sii fidaya
Iyada oo ay maalmo ka soo wareegatay markii Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in gabi ahaanba laga waayay cudurka Carona dalka Soomaaliya gudihiisa, ayaa waxa ku soo badanaya qaybo kamda dalka dadka u dhimanaya cudurka Carona Viruska.
Wasaarada Caafimaadka ayaa shalay sheegtay diiwaangelisay 63 kiis oo cusub oo ah COVID19 48kii saacadood ee lasoo dhaafay, taasoo wadarta guud ka dhigaysa 15,788 kiis. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya ayaa sheegtay kiisaska cusub inay kala joogaan Muqdisho 50 qof, Puntland 9 qof, Galmudug 3 qof iyo Hirshabeelle 1 qof.
Dhanka kale Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Dr. Fowsiya ayaa sheegtay inay tirada guud ee dadka bogsooday tahay 7,729 qof.Bukaannada cusub 32 waa rag. 31-na waa dumar, Waxaana guud ahaan dalka cudurka ugu geeriyootay 847 ruux.
Dhanka kale, lama oga in liiska wasaarada sheegtay in uu yahay mid sax ah maadaama dadka intiisa bdan ay ku dhimanayaan guryahooda. Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo kahor tagga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelanayo.